फेसबुकमा पोष्ट गरेर पैसा कमाउन सकिने अब - Naya Samaya
फेसबुकमा पोष्ट गरेर पैसा कमाउन सकिने अब
Posted by Naya Samaya | Apr 23, 2016 | प्रबिधि |0|
फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? तपाइँ फेसबुकमा झुण्डिइरहेको अरुले खासै जाति मान्दैनन् र अनेकथरी भन्छन् होला ।
तर तपाइँ चाहीँ आफ्नो फेसबुकमा राखेको स्टाटस वा अपलोड गरेको फोटोमा यति लाइक तथा यति कमेन्ट आयो भन्दै मख्ख पर्नुहुन्छ ।
फेसबुकमा जतिधेरै लाइक र कमेन्ट आएपनि त्यसले खान दिने होइन, के मतलब ? भन्ने मान्छेहरुको सामना पनि धेरैपटक गर्नुपरेको छ होला । तर चिन्ता नलिनुस् अब छिटै तपाइँले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ ।
फेसबुकमा तपाइँले गरेको लोकपि्रय पोष्टले तपाइँलाई पैसा आर्जन गरिदिनेछ ।
हो, सुन्दैमा निकै उत्साहित हुने खालको समाचार छ यो । सोसल मिडिया साइट फेसबुकले एक नयाँ फिचर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार फेसबुकको नयाँ फिचरको नाम टिप जार हुनसक्छ । यो फिचरको सहायताले फेसबुक प्रयोगकर्ताले अहिले कसैको मनपर्ने पोष्टमा लाइक ठोकेजस्तै क्लिक गरेकै भरमा पैसा दान अर्थात् क्यास टिप दिन सक्नेछन् । अनि लाइक पाएजस्तै फेसबुक प्रयोगकर्ताले पैसा पाउनेछन् ।
टेक साइट दी भर्जले यस बारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको छ । उसले फेसबुकले गरेको एउटा सर्भेक्षण फेला पारेको छ जसमा सोधिएको थियो की फेसबुकमा पैसा कमाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय के हुनसक्छ ? सर्भेक्षणका क्रममा दिइएका विकल्पहरुमध्ये एउटा टिप जार थियो ।
यो फिचर सम्भवतः लाइक बटन जस्तै हुनेछ । यो बटनमा क्लिक गरेर कुनैपनि प्रयोगकर्ताले आफुलाई मन पर्ने पोष्ट गर्ने फेसबुके साथीलाई नगद टिप दिन सक्नेछन् ।
यस्तो प्रणालीलाई माइक्रो पेमेन्ट अर्थात सुक्ष्म भुक्तानी पनि भनिन्छ । यो पूरानो प्रणाली हो र फ्लाटर जस्ता कम्पनीहरुले प्रयोगकर्तालाई केही कोष जम्मा गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछन् जुन उनीहरुले आफ्नो मनपर्ने सामाग्रीमा खर्च गर्न सक्दछन् । ब्लेन्डल लगायतका सर्भिसले पनि अनलाइन सामाग्रीहरुमा थोरै पैसा खर्चिने सुविधा प्रदान गर्दछन् ।
तर विद्यमान यस्ता सुविधाहरुको प्रयोगकर्ता खासै छैनन् । तर यदि फेसबुकमा यस्तो सुविधा सुरु भयो भने यो सिस्टम निकै लोकपि्रय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेसम्म फेसबुकका चर्चित पेजहरुमा देखापर्ने विज्ञापनहरुबाट आर्जन हुने रकम समेत फेसबुकले सम्बन्धित पेजको धनीलाई दिने गरेको छैन र यो विषयमा फेसबुकको खुबै आलोचना हुने गर्दछ ।
फेसबुकले निकट भविष्यमा ल्याउन थालेको पोष्टबाट प्रयोगकर्ताले पैसा कमाउन सक्ने टिप जार फिचरले यी सबैखाले गुनासाको समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
दी भर्जका अनुसार फेसबुकले सर्भेक्षणका क्रममा दिएका विभिन्न विकल्पहरुमा डोनेट बटन, एड रेभेन्यू शेयरिंग तथा ब्राण्डेड कन्टेन्ट लगायतका रहेका थिए ।
स्मरण रहोस् यु ट्युबले भने प्रयोगकर्तालाई समेत कमाइको केही हिस्सा दिने यस्तो सिस्टम पहिले देखि नै प्रयोगमा ल्याइरहेको छ ।
यु ट्युबमा निकै चर्चित प्रयोगकर्ताहरुका सामाग्रीमा विज्ञापनबापत प्राप्त आम्दानीको केही हिस्सा गुगलले सम्बन्धित युट्युब प्रयोगकर्तालाई पनि छुट्टाउने गरेको छ । कतिपय यु ट्युब स्टारहरुले यु ट्युबबाटै लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
फेसबुकले ल्याउन लागेको आम्दानी बाँड्ने यो योजना पनि निकै सफल तथा लोकपि्रय हुने विश्वास गरिएको छ ।
फेसबुकको नयाँ लाइभ भिडियो फिचर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि निकै उपयोगी भइरहेको अवस्थामा यदि आफ्ना फेसबुक पोष्टको लोकपि्रयतासँगै पैसा समेत आर्जन हुन थालेमा फेसबुकको टिपजार फिचर अवश्य पनि हिट हुनेछ ।
Previousहङकङ झापा मन्चको नयाँ बर्ष २०७३ को शुभकामना अदानप्रदान सम्पन्न
Nextगणेश थापाको अपिल खारेज
“वाई-फाई” भन्दा दशगुणा सस्तो, सयगुणा छिटो हुने “लाई-फाई”
मेमोरी कार्ड कसरी छान्ने ?
स्मार्ट चस्माबाट भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिने